Cusbooneysiinta firmware ee AirPods Pro iyo AirPods 2 illaa nooca 3E751 | Waxaan ka socdaa mac
Shirkadda Cupertino kaliya cusbooneysii qalabka ku saabsan AirPods Pro iyo jiilka 3aad AirPods illaa nooca 751EXNUMX, Noocani wuxuu imanayaa ka dib kii ugu dambeeyay ee la sii daayay Sebtember hore. Runtu waxay tahay in AirPods ay helaan casriyeyn yar laakiin uma baahna wax badan maadaama ay si fiican u shaqeeyaan.
Waxaan kugu dacweynayaa adiga iyo sida ay ugu dhacdo noocyada qaar ee nidaamyada hawlgalka macruufka, macOS, tvOS, iwm. wax macluumaad ah laguma darin hagaajinta laga hirgeliyay samaacadaha sameecadaha ee Apple laakiin waxaa la tuhunsan yahay inay xoogaa soo kordhin karaan hagaajinta ama cilladaha cilladaha.
Waxa cad ayaa ah in noocyadan cusub ee firmware-ka ah ay si otomaatig ah ugu rakiban yihiin iyaga. Isticmaaluhu maahan inuu sameeyo wax aan ka ahayn waxay leeyihiin AirPods ama AirPods Pro oo ku xiran qalabka macruufka iyo gudaha kiiska inay si otomaatig ah u fuliyaan cusbooneysiinta qalabka.
Xusuusnow inaad ka hubin karto nooca firmware-ka ah ee aad ku rakibtay barnaamijkaaga AirPods AirPods Pro si toos ah iphone-keena. Tan awgeed waxaan si fudud ugu tagi karnaa Guud ahaan, ku saabsan, AirPods oo fiiri nooca qalabka lagu rakibay. Waa run in cusbooneysiintani ay ku dari karaan xoogaa horumar ah ismaamulka ama xitaa dhawaaqa sameecadaha laftooda, laakiin waxa laga hirgelinayo runti lama yaqaan.
AirPods shaki la'aan waa mid kamid ah aaladaha ugu guuleysiga badan Apple ogolaanshaha iPhone-ka iyo hadda imaatinka AirTags. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxay u muuqataa in AirPod-yadaani ay aad u baahsan yihiin oo ay lumin karaan xoogaa caan ah suuqa hadda jira, marka lagu daro ma aanan ku arkin qaabka cusub dhacdada markay tahay Abriil 20 mana jirto wax xan ah oo ku saabsan bilaabitaankeeda suurtagalka ah dhowaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Cusbooneysiinta firmware ee AirPods Pro iyo AirPods 2 illaa nooca 3E751
Nomad wuxuu bilaabayaa saldhigga lacag-bixinta yar ee loogu talagalay dadka safarka ah